Fampiharana - Leyon Piping System Co., Ltd.
Fitaovana fantsona sy fantsona no mandeha mana-tànana. Tahaka ny fantsona ampiasaina amin'ny rindranasa fonenana, habakabaka sy indostria, dia toy izany koa ny fantsom-peo. Tsy misy fantsona azo zahana raha tsy misy fametahana mety sy flanges mety. Ny kitapo fantsom-pohy dia mamela ny fantsona hametrahana sy hampifamatotra na hampifamatotra izany raha ilaina ary ajanonana amin'ny toerana mety.
Ahitana karazan-damba marobe isan-karazany amin'ny habeny sy habe ary fitaovana. Miaraka amin'ny fivoarana haingana eo amin'ny sehatry ny indostrian'ny indostria sy asa fikarohana maharitra ato amin'ity orinasa ity, dia misy vokatra vaovao isan-karazany. Ny fittings sasany dia manana endri-javatra manokana mba hahafahan'izy ireo mamoritra amin'ny fotokevitra samihafa toy ny hydraulika, pneumatic miankina amin'ny fampiasana farany. Ny kabary dia misy vokatra marobe miankina amin'ny fangatahana isan-karazany izay ampiharana azy ireo.
Tsy misy fiafarana ny fampiharana ireo fantsom-pamokarana raha tsy misy fiafarana ireo fampiharana ireo fantsona. Raha mitohy mitombo ny lisitr'ireo fantsonam-peo, ny heriny, ny fahafaha-milefitra, ny tahan'ny fandehanana tsara ary ny fanoherana simika avo dia toetra mampiavaka amin'ny hetsika na famindrana ranon-tsavony, setroka, solika ary rivotra amin'ny lafiny iray. Amin'ny fantson-drano, ny fantsona fantsona dia misy fampiasana hafa toy izao manaraka izao:
Ny famindrana ireo akora mampidi-doza toa ny simika sy ny fako.
Fiarovana ny fitaovana saro-pady avy amin'ny tsindry avo.
Fiarovana amin'ny faharatsiana sy ny toetry ny andro hafa.
Fanoherana ny simika ao amin'ny tokatrano sy indostria.